परिवारले अनलाइन क्लासमा सहभागी हुन न'दिएपछि एक छात्राले आ'त्मह'त्या गरिन् ? - Filmy News Portal Of Nepal
परिवारले अनलाइन क्लासमा सहभागी हुन न’दिएपछि एक छात्राले आ’त्मह’त्या गरिन् ?
कोभिड–१९ संकटका कारण नेपाललगायत भारतका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा अनलाइन कक्षा सुरु भएको छ । यस्तै अनलाइन कक्षामा समावेश हुन नपाएका कारण भारतको केरलमा १४ वर्षकी एक छात्राले कथित रुपमा आ’त्मह’त्या गरेकी छिन् । आ’त्मह’त्या गर्ने छात्रा केरलको गभरमेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूलकी छात्रा थिन् ।
दलित कोलोनीको आफ्नो घरभन्दा २ सय मिटर पर छात्राले कथित रुपमा आफूमाथि आ’गो ल’गाइन् । स्कूका एक शिक्षक श्रीकान्त पेरुमपेराविलले बीबीसी हिन्दीसँग भने, ‘उनी ८ कक्षाकी निकै मिहिनेती छात्रा थिइन् । उनलाई ९ कक्षामा प्रोमोट गरिएको थियो । हामीले छात्रा र उनका आमा–बुवालाई अनलाइन क्लासको ट्रायल ७ दिनसम्म चल्ने बताएका थियौं । यसैबीच यस्तो दु’र्घटना भयो ।’
छात्राका पिताले अन्य भारतीय मिडियासँगको कुराकानीमा आफू दैनिक ज्यालादारी मजदुर भएकोले ल’क’डाउनका कारण आफ्नो टिभी सेट बनाउन नसकेको बताएका छन् । यतिमात्रै होइन, यो परिवारका कोही पनि सदस्यसँग स्मार्टफोन छैन तसर्थ अनलाइन कक्षाका लागि स’मस्या थियो ।
केरलमा अनलाइन कक्षा सरकारद्वारा सञ्चालित एजुकेशन च्यानल विक्टर्स च्यानलमा हेर्न सकिन्छ । छात्राका पिताले स्थानीय मिडियासँग भने, ‘अनलाइन कक्षामा सरिक हुन नपाउँदा उनी अत्यधिक चि’न्तित थिइन् । मैले उनलाई शिक्षकले केही न केही विकल्प त निकाल्छन् भनेर सम्झाएको थिएँ ।’ – बीबीसी